नेपालमा नयाँ समाचार : प्रधानसेनापतिको सम्पत्ति सार्वजनिक – Chitwan Post
नेपालमा नयाँ समाचार : प्रधानसेनापतिको सम्पत्ति सार्वजनिक
नेपाली जनता पक्कै पनि यसपालि छक्क परेको हुनुपर्छ । कल्पनै नगरेको, सपना र बिपनामा कहिल्यै अन्दाज नगरेको साँचो समाचार यसपटक नेपालमा छरपस्टियो । त्यो समाचार हो– “नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली सेनाका बहालवाला बोसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण इमानदारितापूर्वक जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गरिदिए । सबै नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ, ती सेनाप्रमुखको नाम हो “पूर्णचन्द्र थापा ।”
नेपाली सेनाको इतिहास धेरै पुरानो छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दैगर्दा निर्माण गरेका गणदेखि पछि निर्माण गरिएका गणहरुसहित यतिबेला नेपालमा झन्डै एक लाखको संख्यामा नेपाली सेना छन् । संसारमा हाम्रो नेपाली सेनाको ठूलो इज्जत छ । विश्वमा “बहादुर”को नामले चिनिने हाम्रो सेना हिम्मतको प्रतीक भएकै कारण दुनियाँले बहादुर भनेको हो । नेपाली सेनाले आफ्नो जन्मकालदेखि सधैँ देश रक्षामा आफूलाई समर्पित गरेको छ । हाम्रो नेपाली सेनाको गर्विलो इतिहासकै परिणाम भन्नुपर्छ कि आज विश्वमा जहाँजहाँ अशान्त भएको छ, जुनजुन देशमा गृहयुद्ध भएको छ वा देश–देशबीच लडाइँ भएको छ त्यहाँ शान्ति स्थापनाका लागि हाम्रो सेना पुग्ने गरेको छ । शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष अनुरोधमा हाम्रो नेपाली सेना संसारका विभिन्न मुलुकमा तैनाथ भएका छन् ।
नेपाललाई विश्वका धेरै देशका मानिसले चिनेका छन्, जानेका छन् । नेपाललाई दुनियाँले चिन्ने केही कारणमा गौतमबुद्ध जन्मिएको भूमि, सगरमाथा भएको देश, एकसिंगे गैँडा भएको देश, मन्दिरैमन्दिरको देश, प्राकृतिक विविधताको धनी देशजस्ता नामले त चिन्छन् नै, गोर्खाली सेना भएको देश अर्थात् बहादुर सेनाद्वारा संरक्षण गरिएको देश नेपाल भन्ने नामले पनि आज हाम्रो देशको गरिमा संसारमा बढेको छ । गौतमबुद्धलाई शान्तिका प्रतीक, अहिंसाका प्रतीक मानिने हुँदा आज विश्वमा बुद्धको महिमा फराकिलो भएको छ भने बुद्धसँगै नेपाल र नेपाली जनताको नाम र इज्जत विश्वमा फैलिएको छ । जहाँ बुद्ध त्यहाँ नेपाल र नेपाली । बुद्धलाई जहाँ सम्मान गरिन्छ, पूजा गरिन्छ त्यहाँ बुद्ध कहाँ जन्मिए भन्ने प्रसंग चल्दै नेपाल र नेपाली जोडिने हुँदा आज हाम्रो परिचय विश्वमा स्थापित भएको छ । अब सगरमाथाले पनि हाम्रो इज्जत कम्ता धानेको छैन ।
संसारका देशहरुमा नेपालभन्दा नचिन्ने अवस्था हुँदा पनि माउन्ट एभरेष्ट अर्थात् सगरमाथाको देश भन्नेबित्तिकै दुनियाँले हाम्रो देशलाई चिन्छन्, जब हाम्रो देशलाई चिन्छन् भने हामी नेपाली जनताको परिचय नजोडिने कुरै भएन । गैँडाले पनि हाम्रो परिचय दुनियाँलाई दिएको छ । विश्वमा लोप हुँदै गएको एकसिंगे गैँडा नेपालको जंगलमा पाइन्छ । आज पनि संसारका मानिसहरु त्यही लोपोन्मुख जीवलाई आँखैले हेर्न नेपालका जंगलमा जान आतुर देखिन्छन् । गैँडाले हामीलाई हाम्रो परिचयमात्रै दिएको होइन, डलर पनि दिएको छ । यतिबेला नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिए पनि आज पनि नेपाललाई मन्दिरैमन्दिरको देश भन्ने गरिएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका विभिन्न भागमा अनेक नामका देवीदेवताका मन्दिरहरु छन् । पुरानो कलासंस्कृति झल्काउने मन्दिरहरु पनि हामी नेपाली जनताको शान, परिचय र गौरवको रुपमा रहेको छ । मन्दिरले पनि हामीलाई चिनाएका छन् ।
प्राकृतिक विविधताको कुरा गर्ने हो भने दुनियाँ नेपालको प्राकृतिक विशेषतालाई हेर्दा छक्क पर्छन् ! नेपालमा खोलानाला र नदीहरु छन् । पानीको कमी छैन । जंगल पर्याप्त छ । उत्खनन प्रक्रिया ठीक ढङ्गले थालनी नगरिएको कुरा बेग्लै हो, खानीको कमी नभएको पनि वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । खेतीयोग्य जमिन आज पनि मेहनत गर्ने र ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भने कृषि उत्पादनले नै देश पालिन सक्ने अवस्था छ । उन्नत तरिका अपनाउने हो भने पशुपालन व्यवसायबाट पनि नेपालका सम्पूर्ण जनता लाभान्वित हुन सक्छन् । एउटै जात र एउटै धर्म मान्ने मान्छे छैनन् यो देशमा, विभिन्न जातका मान्छे र अनेक धर्म मान्ने मान्छे छन् । बहुधार्मिक र बहुजातिका मानिसको बसोवास भएको देशको नामले पनि यो देशलाई संसारले चिन्ने गरेको छ । नेपाल र नेपालीलाई चिन्ने यस्ता मह¤वपूर्ण विशेषतापछि अर्को एउटा थप विशेषता नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास हो, जसले हामी नेपालीको शिर सधैँभरि उँचो बनाएको छ । आज त्यही गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली राष्ट्रियताका पहरेदार–शक्ति नेपाली सेनाका प्रमुखले इमानदारितापूर्वक आफ्नो धनसम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुलाई नेपाली जनताले पक्कै पनि सुखानुभूति गरेका छन् ।
सेनाप्रमुखले यस्तो अवस्थामा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरे जतिबेला नेपाल आर्थिक भ्रष्टाचारले पूरै लङ्गडो भएको छ । आज नेपालमा कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने प्रश्न भन्दा कहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन ? भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था छ । यो देशमा २ रूपैयाँ आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नेदेखि लिएर २ सय अरब भ्रष्टाचार गर्ने मानिस छन् भनिन्छ । यो पेसा वा त्यो पेसाका मानिस होइन, अपवादलाई छाडेर हरेक पेसाका मान्छे चरम भ्रष्टाचारीको रुपमा परिचित भइसकेका छन् । एयरपोर्टमा तस्करलाई समात्न खटाएको पुलिसले सुन तस्करीमा सहयोग पु¥याएको समाचार आउँछ । भन्सारमा राजस्व उठाउन खटाएको कर्मचारी तस्करसँग मीत लाउँछ र तस्करलाई सहयोग गर्छ, आफ्नो भुँडी पनि ठूलो बनाउँछ । कर्मचारी भर्ना, सरूवा–बढुवामा यो देशमा आर्थिक लेनदेन हुन्छ । त्यस्ता आर्थिक लेनदेन गर्ने भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई लाज लाग्दैन । कानुन त कसैलाई लाग्छ त कसैलाई लाग्दैन यो देशमा, तर लाज त सबैलाई लाग्नुपर्ने हो त्यो पनि लाग्दैन । पापको डर नहुने, कानुनले नछुने र लाज पनि पचेको अवस्थामा यो देश कसरी चल्ला ? ताज्जुबको विषय बन्न पुगेको छ !
सबैलाई थाहा छ यो देशमा राजनीतिको पावर, धनको पावर र पदको पावरमा कानुनलाई किचिन्छ, थिचिन्छ र मर्काइन्छ । यसरी किचिने, थिचिने र मर्काइने गर्दा यदाकदा सबैभन्दा कमजोर, कुनै राजनीतिक दलका नेतासँग नजिक नभएका वा दलका सदस्यता नलिएका, कुखुरा र बाख्रा चोरहरु, मदिरा सेवन गरी श्रीमती कुट्नेहरु कानुनको फन्दामा पर्ने गरेका छन र पदवाला, राजनीतिक पावरवाला र धनवालाहरु कानुनको फन्दामा परेका छैनन् । आजसम्म यो देशमा यस्तो हुनुमा अरु कारण थिएन, थियो त केवल पद, धन र राजनीतिको तागत गलत तरिकाले प्रयोग गर्नु नै प्रमुख कारण थियो ।
तर, यसपटक यो देशमा चमत्कार भएको छ । देशको शक्तिशाली नेपाली सेना जो नेपाली राष्ट्रियताको पहरेदार हो, त्यो शक्तिका प्रमुखले नै इमानदारिता देखाए । यो उनको आर्थिक पारदर्शितालाई एकप्रकारले देशमा भइरहेको आर्थिक भ्रष्टाचारविरूद्धको घुमाउरो कदम भन्न मिल्छ । उनको यो कामले देशभरिका शक्तिशाली भ्रष्टाचारीहरुको ढाडमा चिर्पट हानेको छ । देशका सबैभन्दा शक्तिशाली दुई–चार जनामध्येका एक नेपाली सेनाका प्रमुखले नै आर्थिक भ्रष्टाचारविरूद्ध सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै खबरदारी गरेपछि आजैका मितिदेखि देशका सबै साइजका आर्थिक भ्रष्टाचारीहरुको सातो उडेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हिजोको इतिहास थियो– उच्च पदका मान्छेहरुले जतिसुकै धन जुनसुकै तरिकाले कमाए पनि कोही बोल्न नमिल्ने वा नसक्ने । अब इतिहास बदलिएको छ । यतिबेलाका प्रधानसेनापतिले आफ्नो धन सार्वजनिक गरेपछि आउने सेनापतिले पनि सार्वजनिक गर्नेछन् । सेनाजस्तो शक्तिशाली निकायका हाकिमहरु स्वयं नै आर्थिक भ्रष्टाचारको विरूद्धमा फलामे खम्बाजसरी उभिएपछि आउने दिनमा अरु लुतेहरुले आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्ने छैनन् ।
अरुलाई लुते भन्नुपर्ने अन्य कारण होइन, सेना नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो जसको बलमा राज्यसत्ता अडिन्छ र सबै संयन्त्रहरु ब्यालेन्समा रहन्छन् । आज नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट सक्कलीरुपमा सेनापतिद्वारा आर्थिक भ्रष्टाचारविरूद्ध बिगुल फुकिएको छ, जुन बिगुलको थर्थराहटपूर्ण आवाज नेपालका सबै सरकारी कार्यालयका कुर्सीसम्म पुग्नेछ । सरकारी निकायहरु मात्रै होइन, निजीरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने र कर छल्ने, अनियमितता गर्नेहरु सबैको चोटाकोठासम्म यसको असर देखा पर्नेछ । माहिर भ्रष्टाचारीहरुको सातो उड्ने छ । सेनापतिको यो कामले यो देशबाट पूरै आर्थिक भ्रष्टाचार उन्मूलनै होला÷नहोला, तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि मद्दत भने गज्जबले मिल्नेछ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।